Imibuzo evame ukubuzwa - Hebei Huipin Machinery Co., Ltd.
1. Ingabe ungumkhiqizi noma inkampani yokuhweba?
Yebo, singumkhiqizi womshini kawoyela wokudla iminyaka engaphezu kwengu-14.
2. Ungayikhetha kanjani okulungile?
Sicela usithumelele izidingo zakho eziningiliziwe nge-imeyili noma nge-intanethi, futhi sizoncoma imikhiqizo efanelekile ngokuya ngezidingo zakho.
3. Unayo imishini esitokweni?
Cha, umshini wethu ukhiqizwa ngokuya ngesicelo sakho.
4. Ngingayikhokhela kanjani?
A: Samukela ukukhokha okuningi, okufana ne-T / T, Western Union, L / C ...
5. Ngabe izokwehluleka kwezokuthutha?
A: Ngicela ungakhathazeki. Izimpahla zethu zipakishwe ngokuqinile ngokuya ngamazinga wokuthekelisa.
6. Uyakunikela ukufakwa kwezilwandle?
Sizothumela unjiniyela ochwepheshe ukukusiza ukufaka imishini kawoyela, kanye nokuqeqesha abasebenzi bakho ngokukhululeka.
Ama-USD80-100 umuntu ngamunye ngosuku, ukudla, indawo yokuhlala kanye nethikithi lomoya kuzoba kumakhasimende.
7. Yini okufanele ngiyenze uma ezinye izingxenye zephukile?
A: Sicela ungakhathazeki, imishini ehlukene, sinezingxenye ezigqokiwe zewaranti yezinyanga eziyi-6 noma eziyi-12, kepha sidinga amakhasimende ukuthi athwale amacala okuthumela. Ungathenga futhi kithi ngemuva kwezinyanga eziyi-6 noma eziyi-12.
8. Uyini umkhiqizo kawoyela?
Isivuno sikawoyela sincike kokuqukethwe kukawoyela kokuqukethwe kwakho.Uma okuqukethwe kukawoyela kwezinto zakho kuphezulu, ungathola uwoyela obaluleke kakhulu. Ngokuvamile, okusalayo kukawoyela weScrew Oil Press kungu-6-8%. okusele kukawoyela wokukhishwa kwe-Oil Solvent is 1%
9. Ngingawusebenzisa umshini ukukhipha izinhlobo eziningana zezinto zokusetshenziswa?
Yebo kunjalo. njenge-sesame, imbewu ye-sunflwoer, i-soya, i-peanunt, ukhukhunathi, njll
10. Yini impahla yakho yomshini wakho?
I-Carbon steel noma i-Stainless steel (Uhlobo olujwayelekile yi-SUS304, ingenziwa ngezifiso ngokwesicelo sakho)
Imikhiqizo Okufakiwe, Ibalazwe, Yonke Imikhiqizo I-Oil Expeller, Umshini Wokucindezela Uwoyela, Umshini Wokucindezela Uwoyela Omncane, Umshini Wokucindezela u-Cold Press, I-Olive Oil Press, Umhlwanyeli Wembewu Yembewu,